Umu Obiligbo - Onye Na Efu Efu
TIE M, NA-AD UNGH ME M, KONU M nkezi 4 / 5 si 5
NA / A, o nwere ihe nlere 7.5K
Drama, manga, tozuru okè, romance, Yaoi
Itabashi, onye na aru ahia ebe akwa na ime obodo na azu ahia ya na nwa klas ya nke Adachi n’abia n’uzo di njo. Adachi bụzi akụkụ nke yakuza, ọ bịara ebe a ịchụpụ Itabashi n'ụlọ ahịa ya ma mezigharịa mpaghara ahụ dum! Iji kpuchido ihe nna nna ya na obodo ya, Itabashi na-agba mbọ ime ka o kwenye, mana Adachi siri ọnwụ na ọ "na-emejupụta ọchịchọ Itabashi." Ndi ha abuo ga-enwe nkwekọrịta na nke a?
Gụọ ọhụụ kachasị ọhụrụ, webtoons adịchaghị, naanị manga saịtị